Roa Taona Ary Mbola Tsy Niseho Ny Rariny, Fa Tsy Nanadino Ireo Mpianatry Ayotzinapa i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 12:25 GMT
“Velona no nakan-dry zareo azy, velona no tianay hamerenana azy ireo”. Tsangambato ho fahatsiarovana ireo mpianatra niharan'ny fanjavonana an-terisetra, napetraka eo amin'ny Fitsangatsanganan'ny Fanavaozana ao an-tanànan'i Meksiko. Sary an'ny mpanoratra ary nahazoana alàlana ny famoahana azy.
Manamarika ny tsingerintaona faharoa nisian'ireoandianà hetsika maro feno herisetra, ny 26 Septambra 2016, izay nisiana vondronà mpianatra avy amin'ny Kolejin'ireo Mpiofana ho Mpampianatra any Ambanivohitra Raúl Isidro Burgos – miaraka amin'ireo foibeny any Ayotzinapa, any Mekiska andrefana, fanjakan'ny Guerrero – nogiazan'ny polisy teo an-toerana ary avy eo nomeny an-tànana ny vondrona mitam-piadiana fantatra hoe ny Guerreros Unidos, na “Mpiady Miray” (kilalaon-teny, satria midika hoe “mpiady” amin'ny teny Espaniola ny hoe guerreros). Tsy mbola misy mibaby heloka hatreto momba ilay raharaha Ayotzinapa – hatramin'ny nahafantarana ity andianà fotoana mangidy ity.
Manamarika ny fiantombohan'ny fitontonganan'ny lazan'ny Filoha Enrique Peña Nieto ilay fanjavonana an-terisetra nanjo ireo mpianatra miisa 43 avy any Ayotzinapa, ary narahan'ireo karazana kolikoly avo lenta sy/na tantara ratsy miresaka fifandiranà tombotsoa izay maha-voarohirihy ny filoha sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Fanampin'ireo tantara ratsy ireo ny fahitàna ireo tranga hafa feno herisetra izay nanaovan'ireo hery ao amin'ny governemanta famonoana ho faty ivelan'ny lalàna ireo sivily, toy ny raharaha Tlatlaya ary ny Vonomoka tao Apatzingán, raha tsy hilaza afa-tsy ireo vitsy ireo.
Efatra ambiny roapolo volana izay no lasa hatramin'ny nanjavonan'ireo mpianatra. Olona roa samihafa no efa nitantana ny biraon'ny Tonian'ny Mpampanoa Lalàna tao Meksika (PGR, amin'ny teny Espaniola), birao izay ampahan'ny Ministeram-panjakàna (manampahefana amin'ny fanenjehana araka ny lalàna any Meksika) ary nanao fanadihadiana. Maherin'ny olona 110 no efa niharan'ny fitazonana vonjimaika, nampangaina ho tafiditra amin'ny raharaha Ayotzinapa, ary tsy misy na iray aza nambara ho tomponandraikitra aminà heloka bevava, entina hilazaina hoe, tsy voaheloky ny mpitsara.
Fenitry ny andrim-panjakana Meksikana: olona 111 isa voatazona tamin'ny raharaha #Ayotzinapa ary tsy misy mahalala marina hoe inona no tena zava-nitranga. Tena tsy misy dikany, sa ahoana?
Mety ny fametraham-pialàn'i Tomás Zerón, izay nisahana ny asan'ny tale jeneralin'ny Masoivoho Fanadihadiana ny Heloka Bevava ao Meksika no vaovao lehibe indrindra tao anatin'ireo andro nialoha izao faharoa taonan'ny Ayotzinapa izao. Tafiditra tao anaty lasibatr'ireo fianakavian'ny mpianatra tsy hita sy ny Vondrona iraisan'ireo Manampahaizana Tsy Miankina Avy Amin'ny Sehatra Maro Rantsana (GIEI), izay nanampy tamin'ny fanadihadiana ary notendren'ny Kaomisionan'ny Zon'olombelona Iraisan'ireo Amerikana, i Zerón.
Nifototra taminà lahatsary nihely ny fitorian'izy ireo azy, lahatsary nahitàna an'i Zerón nihaodihaody teny amin'ny toerana, izay araka ny voalaza ofisialy, nandoroana ireo taolambalon'ny mpianatra. Noeritreretina ihany koa hoe ninia “namafy” porofo teny amin'ilay toerana i Zerón, amin'izay io mba ho hitan'ireo manampahaizana izay niasa tao amin'ilay toerana.
Notakian'ireo fianakavian'ny tsy hita sy i Vidulfo Rosales, izay mpanolotsaina azy ireo amin'ny resaka lalàna, ny fametraham-pialan'i Zerón:
Takianay ny fametraham-pialan'i Tomás Zerón noho ny nanamboamboarany ny porofo tany amin'ny Renirano San Juan, any Cocula.
Maherin'ny 43 ireo tsy hita
Tao anatin'ny hotakotaky ny hatezerana, ary mety hoe tamin'ny fiezahana hitazonana ilay isa 43 lasa tarehimarika famantarana ankehitriny, tena zara raha nisy ireo olona niresaka mikasika ireo hafa tràdoza tamin'io andro nihoson-drà io. Ireo niharan-doza ireo dia ireo olona, mety hoe tsy tratran'ny fanjavonana an-terisetra ry zareo, fa kosa mbola maratra mafy noho ilay herisetra.
Toy izany ny trangan'ilay mpianatra antsoina hoe Aldo Gutiérrez Solano, izay noresahana tao amin'ny vohikala Latin Times ny tantarany:
Aldo Gutiérrez Solano, iray amin'ireo mpianatra tamin'ny Kolejin'ny Mpiofana ho Mpampianatra any Ambanivohitra Raúl Isidro Burgos, izay naratra tamin'ny alin'ny 26 Septambra 2014, tany Iguala. Nahatonga hatezeram-bahoaka nanerana an'i Meksika sy tany ivelany ilay raharahan'i Ayotzinapa, [tsy hoe noho] ireo mpianatra 43 izay nanjavona sy mety hoe novonoin'ny vondrona mpamono olona sy ireo tomponandraiki-panjakana Guerrero teo an-toerana, tamin'ny fomba feno habibiana fotsiny akory, fa ihany koa [noho] ireo maty tamin'io alina io ary ireo naratra sy mbola mijaly amin'ny fianjonanjonana sy zara raha firaharahiana ataon'ireo manampahefana federaly.
Ny Aogositra 2016, notaterina fa voatifitra tamin'ny zavatra (bala) izay nanimba ny 65% -n'ny atidohany ilay mpianatra, Aldo Gutiérrez. Araka ny lazain'ilay manampahaizana momba ny loha izay tonga avy tany Kiobà mba hijery ny momba azy, mbola mijanona “tsy mahatsiaro ny zavatra ataony” izy ary kely ny vintana mety hoe hahasitrana azy.
Noho izany, roa taona aty aorian'ilay fanjavonana an-terisetra nanjo ireo mpianatra 43 isa, nataon'ireo herin'ny governemanta, sy ireo ratra nahazo ireo hafa, ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Meksika (PGR), izay ankehitriny tantanan'i Arely Gómez (mpikambana ao amin'ny antoko misy ny Filoha Peña), dia nanao ankilabao tao anatin'ny fanehoany ny toeriany momba ny zavatra tena nitranga, izay tsy mitovy amin'ilay “marina nanan-tantara” nolazain'ny olona nodimbiasany, Jesús Murillo.
Tsy hafa fa io PGR io ihany no tsy nahavita nanameloka ireo natolotra ny fitsaràna ho tomponandraikitra tamin'ny raharaha Ayotzinapa. Tao anatin'izany resaka izany, nanolotra izao torohevitra manaraka izao ilay mpampiasa Twitter, Rubén Cárdenas:
Raha ny rariny izao dia fisamborana roa ao amin'ny PGR: [Iray] an'i Jesús Murillo Karam noho ny namoronany ilay “zava-nitranga nanan-tantara” ary [iray hafa] an'i Arely Gómez ho fanampiny.
Arely Gómez, anefa, hentitra hoe mbola an-dàlana foana ny fanadihadiana, na volana maro aty aoriana aza:
“Tsy raharaha efa mikatona ny Ayotzinapa”: Arely Gómez |
Mbola mitohy soratana ihany ny tantaran'ny Ayotzinapa. Ho an'ireo fianakavian'ireo mpianatra tsy hita, mbola mitohy ny fikarohana. Ho an'ireo Meksikana rehetra, mbola tadidy tsara ao an'eritreritr'izy ireo ilay raharaha.
Afaka mamaky misimisy kokoa mikasika ilay lazaina ho marina manan-tantara momba ilay raharaha, sy mikasika ny fandraisan'anjaran'ireo manampahaizana avy any ivelany ato ianao.